ပူလစ်ဇာဆု - ဝီကီပီးဒီးယား
ပူလစ်ဇာဆု (အင်္ဂလိပ်: Pulitzer Prize, (/ˈpʊlɪtsər/) သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ချီးမြှင့်သော သတင်းနှင့် အနုပညာဆိုင်ရာ ထိပ်တန်းဆုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ စာပေ၊ ဂီတအရေးအဖွဲ့ စသည်တို့တွင် ထူးချွန်သူများကို နှစ်စဉ် ဆုချီးမြှင့်သည်။ ဟန်ဂေရီလူမျိုး အမေရိကန်နိုင်ငံသား ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူ ဂျိုးဇက်ပူလစ်ဇာ (Joseph Pulitzer)က စတင် ရန်ပုံငွေထောင်ပြီး ၁၉၁၇ ခုနှစ်မှာ စတင်ချီးမြှင့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ နယူးယောက်မြို့ ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှ ကြီးကြပ်ရွေးချယ် သည်။ နှစ်စဉ် ကဏ္ဍ ၂၁ ခုအတွက် ဆုချီးမြှင့်သည်။ ဆုပေါင်းနှစ်ဆယ်တွင် ဆုကြေးငွေသား အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သောင်းစီချီးမြှင့်ပြီး ပြည်သူ့အကျိုးပြု ဂျာနယ်လစ်ဇင်ဆုအတွက် ရွှေတံဆိပ်ဆု ချီးမြှင့်သည်။
2021 Pulitzer Prize
ဒန်းနျာ ချက်စ်တာ ဖရန့်ချ်၏ ဒီဇိုင်း၊ ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းအတွက် ရွှေတံဆိပ်ဆု၏ ခေါင်းနှင့်ပန်းဘက်မှ ရုပ်ကြွပုံများ၊ ၁၉၁၇။
၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် နိုင်ငံတကာသတင်းဆိုင်ရာ ပူလစ်ဇာဆု (Pulitzer Prize) ကို မြန်မာနိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာ မူစလင်များ အကြမ်းဖက်ခံရသည့် သတင်းရေးသားတဲ့ ရိုက်တာသတင်းဌာနက သတင်းထောက် ၂ ဦးကို ချီးမြှင့်လိုက်သည်။ Jason Szep နှင့် Andrew Marshall တို့ ၂ ဦးရေးသားသော သတင်းများသည် ပြတ်သားရဲရင့်သည်ဟု ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှ ပြောသည်။ ရိုဟင်ဂျာများသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ပြေးနေကြပြီး တခါတလေမှာတော့ လူကုန်ကူးသူ၏ သားကောင်အဖြစ်ကိုပါ ရောက်ခဲ့ရသော သတင်းများကို သူတို့က ရေးသားခဲ့ကြတာ ဖြစ်သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် အထူးဆုဖြစ်သည့် လူထုဝန်ဆောင်မှု ပူလစ်ဇာဆုကို အမေရိကန်မှ ဝါရှင်တန်ပို့စ် နှင့် ဗြိတိန်က Guardian သတင်းစာ ၂ စောင်က ပူးတွဲ ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ ဤသတင်းစာကြီး ၂ စောင်သည် အမေရိကန်အစိုးရ၏ လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းမှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်ပကို ထွက်ပြေးခိုလှုံခဲ့သော အမျိုးသား ထောက်လှမ်းရေး အေဂျင်စီ NSA က ဝန်ထမ်းဟောင်း Edward Snowden ရဲ့ ထုတ်ဖော်မှုအပေါ် အခြေခံသည့် သတင်းများ ရေးသားခဲ့သောကြောင့် အမေရိကန်သမ္မတက ၎င်းနိုင်ငံ၏ ထောက်လှမ်းမှုများကို ကန့်သတ်ခဲ့ရသည်အထိ ကိုယ်ရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခြေအတင် ငြင်းခုံမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အထူးသတင်းအတွက် ဆုကို ဘောစ်စတွန်မာရသွန်ဗုံးဖေါက်ခွဲမှုနှင့် ဗုံဖောက်ခွဲသူကို လိုက်ရှာသည့် အကြောင်း ရေးသားသော Boston Globe က ရခဲ့သည်။ ကင်ညာနိုင်ငံ Westgate mall တွင် အကြမ်းဖက် အတိုက်ခိုက်ခံရသော အထူးသတင်းမှတ်တမ်းနဲ့ ဓာတ်ပုံအတွက် ဆု ၂ ခု ဆွတ်ခူးခဲ့သည့် သတင်းဌာနသည် နယူးယောက်တိုင်းစ် ဖြစ်၏ ။
↑ FAQ။ The Pulitzer Prizes။ Columbia University။ “24. How is 'Pulitzer' pronounced? The correct pronunciation is 'PULL it sir.'”
↑ ရခိုင္ပဋိပကၡတင္ျပသူ Reuters သတင္းေထာက္ ၂ ဦး ပူလစ္ဇာဆုရရွိ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပူလစ်ဇာဆု&oldid=672463" မှ ရယူရန်
၂၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၀:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၀:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။